ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ လှုပ်ရှားမှုတွေကို တက်တက်ကြွကြွပါဝင်လုပ်ဆောင်နေရုံတင်မကပဲ အမှိုက်တွေကိုပါ စနစ်တကျပြန်လည်သိမ်းဆည်းပေးနေတဲ့ အုပ်စိုးခန့် – The News Post
လတ်တလောမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အစွမ်းကုန်ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြကာ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့လုပ်ဆောင်နေကြတာကို အားလုံးလည်းသိမြင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်…..။ အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေအတွင်းမှာ အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်း ပြည်သူထဲကပြည်သူတွေပဲ ဖြစ်တာမလို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပရိသတ်တွေ နဲ့ တစ်သားတည်းရပ်တည်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေပြု လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကို တက်ကြွစွာပါဝင်နေတဲ့ လူငယ်အနုပညာရှင်တွေထဲမှာဆိုရင် အုပ်စိုးခန့် တစ်ယောက်လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အုပ်စိုးခန့်ဟာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတက်ကြွစွာပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် မုန့်တွေလှူဒါန်းခဲ့ရုံသာမက အမှိုက်တွေအထိပါ စနစ်တကျနဲ့ ပြန်လည် သိမ်းပေးနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်…..။
အုပ်စိုးခန့်ဟာ အခုလိုတက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို Facebook စာမျက်နှာမှာ “Free our Leaders ! We want democracy ! We need justice……” ဆိုပြီးရေးသားကာ မျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ်တည်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အုပ်စိုးခန့်ရဲ့ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်တွေအ တွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Photo credit-​ Oak Soe Khant’s Facebook acc
လတျတလောမွနျမာနိုငျငံ အတှငျးမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနေ အရပျရပျကွောငျ့ ပွညျသူလူထုအနနေဲ့ တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ အစှမျးကုနျပါဝငျလှုပျရှားနကွေကာ ငွိမျးခမျြးစှာနဲ့လုပျဆောငျနကွေတာကို အားလုံးလညျးသိမွငျကွမယျထငျပါတယျနျော…..။ အခုလိုဖွဈပျေါလာတဲ့ အခွအေနအေတှငျးမှာ အနုပညာရှငျတှအေနနေဲ့လညျး ပွညျသူထဲကပွညျသူတှပေဲ ဖွဈတာမလို့ တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ ပရိသတျတှေ နဲ့ တဈသားတညျးရပျတညျကာ လှုပျရှားမှုတှပွေု လုပျနကွေတာဖွဈပါတယျ။
အခုလိုလှုပျရှားမှုတှကေို တကျကွှစှာပါဝငျနတေဲ့ လူငယျအနုပညာရှငျတှထေဲမှာဆိုရငျ အုပျစိုးခနျ့ တဈယောကျလညျး အပါအဝငျဖွဈပါတယျနျော။ အုပျစိုးခနျ့ဟာ လူထုလှုပျရှားမှုတှကေိုတကျကွှစှာပါဝငျနတောလညျးဖွဈပွီး ပရိသတျတှအေတှကျ မုနျ့တှလှေူဒါနျးခဲ့ရုံသာမက အမှိုကျတှအေထိပါ စနဈတကနြဲ့ ပွနျလညျ သိမျးပေးနတောကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ…..။
အုပျစိုးခနျ့ဟာ အခုလိုတကျကွှစှာပါဝငျလှုပျရှားနတေဲ့သူ့ရဲ့ ပုံရိပျတှကေို Facebook စာမကျြနှာမှာ “Free our Leaders ! We want democracy ! We need justice……” ဆိုပွီးရေးသားကာ မြှဝလောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အခုလိုမြိုး လူငယျတဈယောကျအနနေဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပျတညျလှုပျရှားနတေဲ့ အုပျစိုးခနျ့ရဲ့ပုံလေးတှကေို ပရိသတျတှအေ တှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။